Nintendo Chinja ichave neiri rakakura revabereki control app inowanikwa | IPhone nhau
Uku ndiko kudzora kwekushandisa kwevashandisi veNintendo Shandura
Nintendo yaunza zviri pamutemo nhasi chichava kubheja kwayo kukuru kumusika weconsole: iyo Nintendo Chinja. Nemaitiro ane hushingi, kusanganisa echinyakare zvinonyaradza pamwe nezvinotakurika izvo zvakapa Nintendo mhedzisiro yakadaro munguva yakapfuura, iyo Nintendo switchch yakamiswa seimwe yezvinhu zvinonakidza zvigadzirwa zvegore.
Kunyangwe chiri chigadzirwa chakagadzirirwa kupedza maawa asingaperi evaraidzo, haifanire kushandiswa zvakanyanya. Ndokusaka Nintendo ichizosanganisira pamwe nekumisikidzwa kweiyi koni kunyorera kwema mobile platforms ayo zvinotibvumidza isu kubata maneja emutambo wemudiki weimba, kuve nekugona kubata akasiyana maficha ekushandisa.
Kubudikidza neshambadziro inonakidza inoratidzwa pazasi, iyo vhidhiyo yemutambo kambani inosimudzira iyi ficha, iri pasina mubvunzo imwe yezvinonyanya kufadza zvinouya neiyo switch, nekuti Nintendo consoles ndechimwe chezvinhu zvakajairika zvigadzirwa pakati pevechidiki makore - zvichienzaniswa nezvimwe zvinonyaradza-.
Kuburikidza neapp iyi, vabereki vanogona kuseta muganho wenguva yemutambo (zvakajairika kana zvichienderana nemazuva evhiki), chiziviso chichaonekwa pachiratidziro chemutambo kuti mwana amise mutambo. Kana zvisiri, iyo app inoyambira nezve iyo ovhataimu iri kutambwa uye, kana zvichionekwa zvakakodzera, mutambo unogona kumiswa kubva ku-smartphone. Uye zvakare, iwe zvakare unozokwanisa kuwana mushumo wemazita anotambwa zvakanyanya mumwedzi kana kudzikisira mashandiro emamhepo modhi.
Iyi sarudzo icharerutsa zvakanyanya basa revabereki kana zvasvika pakuronga miganho yakajeka panguva yekutamba, ichivawo kukurudzira kwekutenga kunogona kuitika, uchiziva kuti pane chishandiso chakajeka uye chinobatika chinowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Uku ndiko kudzora kwekushandisa kwevashandisi veNintendo Shandura
Zvinogona kunge kuti iyo iPhone 8 inowedzera IP68 certification